राष्ट्रिय Archives - Page 386 of 396 - News Today
उपेन्द्रले प्रचण्डलाई भने ‘मधेशले अब उधारो सम्झौता गर्दैन’
काठमाडौं १, मंसिर । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश–थरुहट क्षेत्रमा जारी आन्दोलन ...
काठमाडौं १, मंसिर । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश–थरुहट क्षेत्रमा जारी आन्दोलनको सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । तीनकुनेस्थित फोरम नेपालको पार्टी कार्यालयमा मङ् ...
श्यामसुन्दर यादव राजविराज, १ मंसिर । करिब सात फिटका एक हट्टाकट्ठा युवा । जीउभरी सिक्रीले बाँधेर सुरक्षाकर ...
श्यामसुन्दर यादव राजविराज, १ मंसिर । करिब सात फिटका एक हट्टाकट्ठा युवा । जीउभरी सिक्रीले बाँधेर सुरक्षाकर्मीहरुले यातना दिईरहेको दृष्य । यातनासँगै ती युवकले गर्जन गर्दै जब भने ‘तुम लोग हमे कैद कर सकते ...
राजविराज, ३० कार्तिक । विगतका वर्षहरु झैं यो वर्ष पनि सप्तरी जिल्लाको विभिन्न स्थानहरुमा छठ पर्व मनाइदैछ ...
राजविराज, ३० कार्तिक । विगतका वर्षहरु झैं यो वर्ष पनि सप्तरी जिल्लाको विभिन्न स्थानहरुमा छठ पर्व मनाइदैछ । मङ्गलवार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व मनाउन लागिएको हो । बुधवार विहान उदाउँदो सूर्यला ...
राजविराज, २९ कार्तिक । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केन्द्रीय संयोजक डा. सीके राउतले संविधानमा मधेश प्रदेश ले ...
राजविराज, २९ कार्तिक । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केन्द्रीय संयोजक डा. सीके राउतले संविधानमा मधेश प्रदेश लेखिदिए पनि स्वतन्त्र मधेश भए मात्र मधेशी जनताले मुक्ति पाउने बताएका छन् । मधेशी इन्जिनियरिङ्ग स् ...
मधेश प्रिमियर लिगको प्रमुख अतिथि बन्ने राजविराज, २८ कार्तिक । विगत ६ महिनादेखि राजविराजस्थित आफ्नै घरमा न ...
मधेश प्रिमियर लिगको प्रमुख अतिथि बन्ने राजविराज, २८ कार्तिक । विगत ६ महिनादेखि राजविराजस्थित आफ्नै घरमा नजरबन्दमा रहेका वैज्ञानिक डा. सीके राउत आइतवार एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन ला ...
राजविराज, २७ कार्तिक । कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथिका दिन शुक्रवार भाइटीका तथा मधेशका जिल्लाहरुमा भरदुतीया ...
राजविराज, २७ कार्तिक । कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथिका दिन शुक्रवार भाइटीका तथा मधेशका जिल्लाहरुमा भरदुतीया पर्व विशेष महत्वकासाथ मनाइँदैछ । तिहारको अन्तिम दिन यो पर्व मनाइने गरिन्छ । दिदीले भाइलाई र बहि ...
श्यामसुन्दर यादव, राजविराज, २७ कार्तिक । मधेश आन्दोलनले तीन महिना पुरा गरिसक्दा पनि सरकार गम्भीर नभएपछिको ...
श्यामसुन्दर यादव, राजविराज, २७ कार्तिक । मधेश आन्दोलनले तीन महिना पुरा गरिसक्दा पनि सरकार गम्भीर नभएपछिको आक्रोश मधेशमा यत्रतत्र सर्वत्र देखिन थालेको छ । राज्यले मधेशी जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको स ...
आन्दोलनले गर्दा पर्व प्रभावित, रौनकतामा कमी राजविराज । कृष्ण औँसीका दिन बुधवार धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको प ...
आन्दोलनले गर्दा पर्व प्रभावित, रौनकतामा कमी राजविराज । कृष्ण औँसीका दिन बुधवार धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा–आजा गरेर दिपावली पर्व मनाइँदैछ । आ–आफ्ना घर वरिपरि सरसफाइ गरी बत्तीले झिलिमिली पारी लक्ष्मी ...